'आयोनुनले विद्यार्थीको बौद्घिक क्षमता विकास भएको छ' | RevoScience Nepali
विभागीय प्रबन्धक, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड
महोत्तरी जिल्लाको बथनाहाँ गाविस वडा नं ६ मधवामा जन्मिएका हुन् बज्रेशकुमार झा । पिताको सरकारी नोकरीका कारण उनको बाल्यकाल पहाडी भूभाग धादिङको गजुरीमा बित्यो । राजधानी काठमाडौंको चाबहिलस्थित पशुपति माध्यामिक विद्यालयमा उनले कक्षा ९ सम्म अध्ययन गरे । उनले बिएस्सीसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् ।
२०४९ सालमा उनले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा जागिर जीवनको सुरुआत गरेका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा स्नातकोत्तर अध्ययन सुुरु गरेको भए पनि जागिरको चापले गर्दा उनले पूरा गर्न सकेनन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा २५ वर्ष सेवा गरिसकेका उनी अहिले विभागीय प्रबन्धकका रूपमा कार्यरत छन् ।
सन् १९६५ मा नेपाल सरकार, युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत संस्थाले गरेको सर्भेक्षणमा नेपालको कूल जनसंख्याको ५५ प्रतिशत जनतामा आयोडिन कमी रहेको पाइएको थियो । सन् २०१६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय, युनिसेफले गरेको सर्भेक्षणले नेपालमा ९४ प्रतिशत मानिसमा आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच पुगेको देखाएको छ । यो अवस्थामा आइपुग्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको ठूलो हात छ । नेपाल आयोडिनयुक्त नुनको पहुँचमा दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा अगाडि आएको छ । निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा सञ्चालित नेपालकै पहिलो संस्थाको रूपमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई लिने गरिएको छ । यसै सेरोफेरोमा रिभोसाइन्स मासिकले विभागीय प्रबन्धक झासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंका मुख्य जिम्मेवारी के–के छन् ?
–ब्रान्ड प्रमोसनदेखि मिडियासँगको सम्बन्धअन्तर्गतका काम गर्दै आएको छु ।
काममा कतिको चुनौती छ ?
–कामको हिसाबले भन्दाखेरि कर्पोरेसनको फाइदाका लागि गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्पोरेसनको फाइदाको ध्येय लिएर काम गरेमा रमाइलो हुँदो रहेछ । जुनसुकै काममा पनि चुनौती हुन्छ नै ।
पछिल्लो समय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले के–के कुरा बिक्रीवितरण गरिरहेको छ ?
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना २०२० साल भदौ २७ गते भएको हो । नेपालमा पाइने कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर यसले काम गरिरहेको छ । हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र पहिलो मैदा मिल स्थापना भयो । साल्ट ट्रेडिङले पहिलो वनस्पति घिउ उद्योग स्थापना गरेको छ ।
इन्सुरेन्स, फाइनान्स र गोरखकाली रबर उद्योग, काठमाडौं मेट्रो ग्यास, एचटिसीको बिक्रीवितरण गरिरेहका छौं । कागज, राइटिङ/प्रिन्टिङ पेपर सप्लाइ गरिरहेका र्छौ । नेपाल सरकारले अनुदानमा दिएको रासायनिक मल बिक्री–व्यवस्थापन गर्छौं । आमजनतासँग जोडिएका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हामी केन्द्रित छौं । चामल, दाल, घिउ, चिनी, नुनलगायत सामग्री पनि बिक्री वितरण गरिरहेका छौं ।
पछिल्लो समय तपाईंहरुले दुई बालबालिकाको चिह्न भएको आयो नुन प्रयोग गर्नू भन्नुभयो, किन त्यसो गरिएको हो ?
–सन् १९९५ को एक सर्भेले नेपालमा ५५ प्रतिशत बालबालिकामा आयोडिनको कमी देखाएको थियो । त्यो आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण थियो । आयोडिनको कमीले चार प्रतिशत बालबालिका सुस्त मनस्थितिका देखिएका थिए, जुन ‘नेपाल माइक्रो न्युट्रियन्ट स्टाटस सर्भे १९९८’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार, युनिसेफ र भारत सरकारसँग सहकार्य गरेर सन् १९७३ देखि नेपालमा ‘आयोडाइज साल्ट’ अर्थात् आयोडिन मिसाइएको नुन बिक्रीवितरण हुन थालेको हो । त्यसबेला नेपालमा ढिके नुन खाने चलन थियो । ढिके नुनमा मिसाइएको आयोडिन बाहिरी सतहमा मात्र देखिन्थ्यो । केही मानिसले घरमा नुन धोइ–पखाली गरी घाममा सुकाएर प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो । त्यसबाट आयोडिन नष्ट भयो । उक्त समस्या निराकरणका लागि पिसिएको नुनमा आयोडिन मिसाएर ‘प्याकेट’ बनाउन सुरु गरिएको हो । नुन हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने आयोडिन छ भन्नका लागि आधिकारिक रूपमा दुई बालबालिका भएका लोगो राखिएको हो ।
दुई बालबालिकाकै चिह् प्रयोग किन गर्नुभएको ?
–खासगरी आयोडिन कमी भएमा विभिन्न समस्या देखिन्छ । जस्तैः महिला गर्भवती भएको बेला आयोडिन कमी भएमा गर्भ तुहिने, नाबालक शिशु लुलोलंगडो वा सुस्त मनस्थितिको हुनसक्छ । शिशु जन्मेको केही समयमा मृत्युसमेत हुनसक्छ ।
जन्मेका शिशुको सिक्ने क्षमता कमजोर देखिन सक्छ । विद्यालय तहमा उसको सम्झने क्षमता, खेलकुद, पढाइ्लगायत कमजोर हुन्छ । आयोडिन कमी भएमा शारीरिक तथा मानसिक क्षमता ह्रास हुन्छ । यसको कमी भएमा किशोरीमा महिनावारी अनियमित हुन्छ । महिनावारीका बेलामा रगत बढी जाने समस्या देखिनसक्छ ।
आयोडिन कमीले बालबालिकाको ‘आइक्यु लेभल’ सामान्य अवस्थाभन्दा ‘१५ प्वाइन्ट’ कम भएर जान्छ । त्यही भएर हामीले आयोडिनयुक्त नुन बिक्रीवितरण गर्दै आएका छौं । सबल नागरिक बनाउनका लागि दुई बालबालिकाको चिह्न भएको प्रमाणित आयोडिनयुक्त नुन अपरिहार्य छ ।
त्यसो भए आयोडिनको मात्रा चाहिँ कति राखिन्छ ?
एकजना वयस्क व्यक्तिलाई प्रतिदिन १५० माइक्रोग्राम आयोडिन आवश्यक पर्छ । बालबालिका तथा गर्भवति महिलालाई आयोडिन कम आवश्यक पर्छ । दूध खुवाउने महिलालाई प्रतिदिन २२० माइक्रोग्राम आयोडिन आवश्यक पर्छ ।
शरीरले यस्ता आयोडिन विभिन्न वस्तुमार्फत् लिने गर्छ । यदि माटोमा आयोडिन छ, त्यहाँ उत्पादन भएका साग–सब्जीलगायतबाट आयोडिन प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको नुनमा मिसाउनु हो । विज्ञहरूको सुझावका आधारमा करिब १३० देशले नुनमा आयोडिन मिसाएर बिक्रिी–वितरणको व्यवस्था मिलाउँदै आएका छन्, त्यसैअन्र्तगत हामीले काम गरेका हौं ।
मानिसले दैनिक ६ ग्राम मात्र नुन खान उपयुक्त भनिन्छ, आयोडिन बढी खाँदा समस्या हुँदैन ?
हामीले खाने सागसब्जी र फलफूलमा केही न केही मात्रामा आयोडिन पाइन्छ । नुनमा ५० माइक्रोग्राम आयोडिन मिसाइएको हुन्छ । यसलाई ५० पिपिएम अर्थात् पार्ट पर मिलियन भनिन्छ । यो भनेको १ ग्राममा ५० माइक्रोग्राम मिसाइएको हो । हामी दैनिक ६ ग्राम नुन खाँदाखेरी ३०० माइक्रोग्राम आयोडिन नुनबाट लिने सम्भावना देखिन्छ । तर, तरकारी पकाउँदा नुन पहिले राख्ने गरिन्छ । यसरी नुन राख्दा केही मात्रामा उडेर वा नष्ट भएर जान्छ । पसिना/पिसाब दिसाबाट केही मात्रामा आयोडिन निष्कासन हुन्छ । तसर्थ, ३००–४०० माइक्रोग्राम आयोडिनले शरीरमा हानी गर्दैन ।
त्यसो भए बेला–बेलामा अनुसन्धान पनि गर्नुहुन्छ होला नि !
–हाम्रो अनुसन्धान गर्ने काम होइन । तर, हाम्रो पनि प्रयोगशाला छ । जति पनि नुन प्याकिङ गर्ने स्थान छन्, त्यसमा हाम्रो ‘ल्याब’ छ । त्यहाँ हामीले युनिसेफले तोकेको ‘लट क्वालिटि एसुरेन्स सिस्टम’ –एलक्युएएस) पद्धतिको आधारमा जाँच गरी बजारमा बिक्रीवितरण गर्दै आएका छौं । यसमा के हुन्छ भने १० वटा नमूना प्याकेट परीक्षण गर्दा एउटा मात्र फेल भएछ भने त्यो ‘रिजेक्ट’ हुँदैन । तर, दुईवटा फेल भएमा त्यो लट नै ‘रिजेक्ट’ हुन्छ । त्यसलाई फेरि आयोडिन मिसाएर बजारमा निर्यात गर्दछौं ।
प्याकिङपछि पनि छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्छौ । यसबाट सकारात्मक परिणाम देखाएपछि ‘लट ठीक छ’ भन्ने अवस्था आउँछ । हामी त्यो ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’मा सर्तक छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मात्राअनुरुप नुनमा आयोडिन मिसाइएको हुन्छ । खानेकुराको प्रकृति हेरेर नुनमा ५० पीपीएमसम्म आयोडिन मिसाइएको हुन्छ । खाना खाने बेलामा छर्केर खाने हो भने हामीलाई १५ देखि ३० पिपिएम आयोडिनको मात्रा भए पुग्छ । हामीले आयोडिन अन्य स्रोतबाट पनि केही न केही पाइरहेका हुन्छौं । यस हिसाबले आपूर्ति भएको आयोडिन बढी छैन र यसले कुनै असर पुर्याउँदैन ।
आयोडिन मिसाउने काम भारतमा हुन्छ कि नेपालमा ?
उतैबाट आयोडिन मिसाएर ल्याएको हुन्छ किनभने यता मिसाउँदा दोहोरो झन्झट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च पनि बढी लाग्ने हुन्छ । ‘डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलजी एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल’ले परीक्षण गरेर मात्र ल्याएको हुन्छ । भारत साल्ट कमिसनरले आयोडिनको मात्रा ठिक भएको रिपोर्ट दिएपछि मात्र त्यसलाई उपभोग गरिन्छ । नुनको गुणस्तरदेखि आयोडिनको लेबलसम्म त्यहाँबाट प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । हाम्रो ‘ल्याब’मा पनि यसको परीक्षण गरिन्छ । वितरण हुने बेलामा एलक्युएएसबाट फेरि जाँचपडताल गरिन्छ ।
वर्षदिनमा नेपालभर कति नुन वितरण गरिन्छ ?
–१ लाख ८३ हजार मेट्रिक टन ।
नुन प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउनुपर्छ नि, होइन ?
खाद्य ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार कुनै पनि वस्तु बजारमा पठाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने कुरा हामीले उल्लेख गरेका हुन्छौं । ती वस्तुमा कुन–कुन चीज मिश्रण गरिएको छ भनी उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसपछि फाइदा÷बेफाइदाजस्ता पक्षबारे जानकारी गराउनुपर्दछ ।
नुनको प्याकेटमा प्रयोग गर्ने विधि, स्टोर गर्ने विधिलगायत यसबाट हुनसक्ने फाइदा विस्तृत रूपमा लेखिएको हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले आयोडिनको कमीले हुने विकृति रोकथामका लागि जनचेतना अभियान सञ्चालन गरेका छौं ।
बिक्री–वितरण गर्दा केकस्ता चुनौती आइपरेका छन् ?
चुनौतीहरू दुई–तीनवटा छन् । राजनीतिक संक्रमणकालमा भारतसँग ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट अर्थात् व्यापार तथा पारवहन सन्धी नविकरण नहुँदाखेरि पनि नुनको कमी भएन । त्सरकारको नीतिगत निर्णयअनुसार ६ महिनाका लागि नुन भण्डार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अहिले पनि त्यहीअनुसार भण्डारण गरेर राखेका छौ । मधेस आन्दोलन वा अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको बेला पनि नुनको अभाव भएन । मूल्यमा एक रुपता रह्यो । अरु वस्तु जस्तो मूल्यमा तलमाथि हुन दिएनौं ।
नुन उत्पादन गरेको कति मितिसम्म खान हुन्छ ?
नुन आफंैमा बिग्रिँदैन । ‘सोडियम क्लोराइड’लाई इडिबल साल्ट अर्थात् खानयोग्य नुन भनिन्छ । यो ‘स्टेबल कम्पाउन्ड’ भएकाले त्यतिकै बिग्रेर जाँदैन । यसले ‘प्रिजरभेटिभ’को रूपमा काम गर्छ । अचारमा राखेको नुनले बिग्रन÷कुहिन दिँदैन । छालामा राखेको नुनले ‘प्रिजरभेटिभ’को रूपमा काम गर्छ ।
नेपालको खाद्य ऐनअनुसार दुई वर्षको अवधि लेखिएको हुन्छ । तर, नुन आफैंमा ‘एक्सपाएर’ हुँदैन । आयोडिन पनि ‘एक्सपाएर’ हुँदैन । कतै प्याकेट ‘प्वाल’ परेर केही उडेर जाला, तर, त्यसले असर गर्ने भन्ने हुँदैन । कतिपय देशमा नुनमा ‘एक्सपायर डेट’ राखिएको हुँदैन ।
अन्त्यमा, नुनको सही प्रयोग गर्नेबारे के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
–आजभन्दा २०–२५ वर्षअघि दुर्गमका स्कुलबाट एसएलसीमा विद्यार्थी उत्तीर्ण दर अत्यासलाग्दो हुन्थ्यो । तर, अहिले आयोनुनले विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर उकास्न मद्दत गरेको छ । ‘आयोडाइज साल्ट’ले विद्यालयको नतिजा राम्रो देखिएको पुष्टि भएको छ । यस विषयमा कुनै सर्भे नभए पनि आयोडिनले गर्दा ग्रामीण भेगका बालबालिकाको बौद्धिक क्षमता विकास भएको मैले पाएको छु ।
हल्ला गरे जस्तो कमजोर छैन विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय
Next story जडीबुटीको अपार भण्डार
Previous story ‘नेपालमै विदेशीस्तरको शिक्षा दिने योजना छ’
विद्यार्थीले रोपे धान
निरञ्जन पराजुली says:
मलाई अमेरिकाले "extraordinary and exceptional ability" शीर्षकको ग्रिन कार्ड दिएको थियो...
अमेरीकाले मलाई "Extraordinary and Exceptional ability" शीर्षकको ग्रिन कार्ड दिएको थियो...
प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्सरकारी, गैरसरकारी र प्राज्ञिक जमातले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी त्यहाँको सबल पक्ष उजागर गर्दै जिम्मेवार कसरी बनाउने भन्नेमा...
काठमाण्डू। रोगका कीटाणुविरुद्ध लड्न प्रयोग गरिदै आएको रोगप्रतिरोधात्मक एन्टिबायोटिकको...
अन्तर्राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाडका दबेदार...
काठमाण्डौं। वैज्ञानिकहरुले गुरुत्वआकर्षण तरङ्ग विश्वमै पहिलो पटक अवलोकन गरेका छन्। यसले भौतिकशास्त्री अल्वर्ट आइस्टाइनले सन् १९१६ मा प्रतिपादन गरेको ‘सामान्य...
के आइन्स्टाइनले भनेको सत्य थियो ?
विज्ञान प्रवृतिमा भएको गुणात्मक विकाससँगै आज संसार गाउँमा परिणत भएको छ । अझ मानव सभ्यतालाई सहज बनाउन बैज्ञानिकहरु थप अनुसन्धानमा जुटिरहेका छन् । यसैविच...
प्रकाशको गतिमा कारलाई गुडाउने...